Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Ezisiseko
Qaphela ukuHlola kunye nokuGxininiswa kweBe
Kwizaziso zomculo, izandi zivela kumanqaku okubonisa inkcazo eyongeziweyo, ugxininiso okanye ukuxubusha kwincwadana ethile okanye i-chord ethile. Amagqabantshintshi aphezulu e-accents awela ngaphakathi kwintsapho eguquguqukayo, yeeonic okanye ye-agogic. Ngokuqhelekileyo, xa abaqambi basebenzisa i-accents kwisakhiwo abafuna ukudala ukucoca okuthile kwisigcawu somculo.
Ngokuqhelekileyo kumculo weklasikhi, ukuvakala kukuwa kwiinqwelo eziphambili zomlinganiselo.
Ngokomzekelo, ngo-4/4 ixesha uxinzelelo lusetyenzisweni lokuqala nolwesithathu lomlinganiselo. Iingxobo ezingapheliyo ezigxininisiweyo zikwinqanaba lesibini nelesine lemilinganiselo. Xa izibhengezo zisetyenziselwa iinqwelo-isondo sesibini neyesine - isingqimba esiphumela sivakalelwa kukuba ezi zibetho zomeleleyo kwaye zigxininiswa ngakumbi ngenxa yokuchazwa ngokugqamile.
Oku kulula ukuyiqonda ngexesha lesi-3/4. Kwixesha le-3/4, imilinganiselo nganye ineentsimbi ezintathu. Ukubetha kokuqala, okubizwa ngokuba yi-downbeat, iyona nto ibaluleke kakhulu, kwaye ezi zimbini zilandelayo zihamba zikhanya. Uninzi lwama-waltzes lubhaliwe kwixesha le-3/4 kwaye amanqanaba omdaniso ohambelanayo agxininisa ukubetha kokuqala. Ukuba uzama ukubala kwixesha le-3/4, kunokuzwakala ngathi: Enye -emithathu, enye- ezimbini-ezintathu, njalo njalo. Ukuba i-accent isetyenziswe kwisibetha sesibini, ke, ukugxininiswa kwebhere kuyashintsha kwaye ngoku kuyazwakala ngathi: enye enye- yesibini , enye- yesibini- enye, njl.
I-Dynamic, iTonic kunye neAgogic Accents
Iimbalo ezihlukeneyo zidibeneyo zibe ziindidi zintathu: i-Dynamic, tonic kunye ne-agogic. Iimpawu eziphambili zezona zinto ziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo kwaye zibandakanya naziphi na izigulana ezithi zongezele uxinzelelo kwi-note, edla ngokudala ukuhlaselwa okufana nokuthi "kugxininise" kumculo.
Isicaciso se tonic singasetyenziselwa ngaphantsi kwesigxina esishukumisayo, sigxininisa inqaku ngokuphakamisa umgca wayo. Isigama se-agogic senza ubude kwisalathisi esibangela isaziso esivame ukubonwa sisexesha elide kuba umculi ubeka ingqwalasela kule nqaku elithile ukuze akomeze ibinzana lomculo.
Iintlobo zeDynamic Accents
Amanqaku e-Accent angachazwa ngeendlela ezahlukeneyo kumbono womculo.
I-Accent: Uphawu lokubhaliweyo, olufana ne > uphawu, yiyona nto ininzi iimvumi ebhekiselele xa bethetha inqaku lihambelana. Iimvumi eziqeqeshwe ngokuqhelekileyo zinokuthiwa yi- marcato okanye i-accent. Ukuba uphawu lokubhaliweyo lubonakala ngaphezu kwesaziso, lithetha ukuba inqaku kufuneka libe nesigxininiso sokuqala; ezinxulumene namanqaku azungeze kuyo, ukusebenza kwayo kunamandla kwaye kuchazwe ngakumbi.
I-Staccato: I-staccato ifana nesicatshulwa esincinci kwaye ithetha ukuba inqaku lifanele lidlalwe lihlaziye kwaye lichazwe, apho ukuphela kwephayibhile kuthatyathwe khona ukudala ukwahlula okucacileyo phakathi kwayo kunye nenqaku elilandelayo. Ngokuqhelekileyo, i-staccatos iyatshintsha ubude belizwi sele lincinci; ukulandelelana kwamanqaku ekota edlalwa isacaccato inokuzwakala ifutshane kuneenkcukacha zekota zexesha eliqhelekileyo ngaphandle kwesigxina.
I-Staccatissimo: I-staccatissimo ngokuqinisekileyo i-"staccato encinci" kwaye uphawu lwayo lufana ne-downside down down. Uninzi lweemvumi ziyichaza oku kuthetha ukuba i-staccatissimo imfutshane kunokuba i-staccato, kodwa abadlali abasebenza ngokukhawuleza ekusebenzeni komculo, njengexesha leklasi, bangasebenzisa i-staccato kunye ne-staccatissimo ngokungafaniyo, njengoko kwakusamkelwa ngokwempawu ngelixesha.
I-Tenuto: Kwi-Italiya, i- tenuto ithetha "ukugcinwa," okukunceda ukuqonda ukuphawula kwayo. Umqondiso we-tenuto ngumgca ochanekileyo ofana ne-underscore. Xa ifakwe kwi-note okanye kwi-chord, ithetha ukuba umenzi kufuneka adlale ixabiso elipheleleyo leli gama kwaye wongezelela ukugxininisa okufutshane, okuqhelekileyo kwongezwe ngokudlala le nqanaba ngokukhawuleza kwaye igcinwe ngokupheleleyo.
UMarcato: Ukuchazwa kwe-marcato kufana ne-hatty party. NgesiNtaliyane , i- marcato ithetha "ukuphawulwa kakuhle" kwaye inokubangela ukuba inqaku lidlalwe ngokugxininiswa kwongeziweyo, ngokuqhelekileyo kubonakaliswe ngokunyuka kwindlela enamandla.
Ukufezekisa amanqaku okubhaliweyo ekusebenzeni komculo kufuna ukuba ufunde izakhono zobugcisa ezahlukeneyo ezinokunceda umculi enze izivakalisi ngokufanelekileyo. Ngokuxhomekeka kwisimboli somculo, kubandakanya i-pop, i-classic okanye i-jazz, kunye nesixhobo, ezifana nepiyano, i-violin okanye i-voice, amanqaku agxininiso anokuba neendlela ezahlukeneyo zokuqhuba kunye neziphumo zemimandla eyahlukeneyo.
Umntu Wokuqala Uvakalisa
Ukuqonda intsingiselo ka-Ik Onkar (omnye uThixo)
Uluhlu oluphambili lwePeriodic Table of Elements
I-Pelycosaur Imifanekiso kunye neeprofayili
Yintoni eyenzekayo kwi-50 MPG Honda?
I-Irreligion and Being Being Religious
Ukuhlaziywa kweMoto we-Scooter ye-Honda SH150i
I-11 Blizzards ezibi kakhulu kwiMbali yase-US